Taliban oo 26 saldhig ka qabsatay Melleteriga xukuumadda Afghanistan.
Weerar Sedax Kenyaan ah lagu dilay oo ka dhacay gobolka Mandheera.
Al Shabaab oo la wareegay gacan ku haynta deegaan ku dhow Baraawe.
Dowladda Farmaajo oo Itoobiya usaxiixday heshiis Soomaaliya lagusoo gelinayo Maandooriyaha Khaadka.
Dowladda Pakistan oo beenisay in Mareykanku uu wadankeeda ka sameysanayo saldhig uu ka duqeeyo Afghanistan.
Sarkaal katirsan Maleeshiyaad Gorgor oo lagu dilay degmada Wadajir.
Doorashooyin Murun badan dhaliyay oo ka bilaawday dalka Itoobiya.
Monday June 07, 2021 - 17:39:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Mareykanka ayaa tafaasiil yar ka bixisay qaabka ay ciidamadeedu uga baxayaan dalka Afghanistan, jenaraallo American ah ayaa sheegay in ay kujiraan bilihii ugu dambeeyay ee joogitaanka ciidamadooda.
Mas'uuliyiin katirsan Pentagon-ka waxay sheegeen in 11 September wixii ka dambeeya uusan hal askari American ah baaqi kusii ahaan doono ciidda Afghanistan.
Howlgalka bixitaanka badankiis wuxuu ka socdaa hawada Afghanistan halkaas oo ay isku ciriirinayaan diyaarada xamuulka iyo kuwa dagaalka mareykanka.
Shabakad ka faaloota arrimaha duulimaadyada ayaa sheegtay in hawada afghanistan ay wajahayso zaxmadii ugu ballaarneed tan iyo markii ay wadankaas dagaalladu ka bilaawdeen.
Leon Panetta oo ah wasiirkii difaaca maamulkii Obama iyo lataliyihii dhamka amniga Trump ayaa dhaleeceeyay insixaabka degdegga ah ee Afghanistan waxayna sida ay wax usocdaan ku yeesheen kuwa dan u ah Argaxgaxisada oo ay ula jeedaa Taliban.
"haddii aan si cad uhadlo majiro qorshe laga baaraan degay oo ay qaadatay wasaaradda difaaca waxa noo muuqdana waa Talibaan ay fursad helaysa" sidaas waxaa yiri wasiirkii hore ee difaaca.
Leon Panetta ayaa sanadadii uu Pentagonka hoggaaminayay waxaa ka dhacay weeraradii ugu waaweyn ee Taliban ay ku fuliso shisheeyaha.
Mas'uuliyiin American ah waxay sheegeen in mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ay qabsadeen illaa 26 saldhig melleteri tan iyo markii ay ciidamada american-ka ah bilaabeen dib ugurashada.
waxaa la sheegay in dagaalyahanada Taliban ay labaatameeyo saldhig ka faramaroojiyeen cidamada xukuumadda camiilka ah walina ay usi gurguuranayaan xarun goboleedyo muhiim ah.
"ka bixiteenka ciidanka mareykanka ee Afghanistan iyadoo aan lasameyn isku dheeli tirnaan melleteri oo muuqata wuxuu khasaarin karaa dadaaladii labaatanka sano socday wuxuuna xaaladda uekaysiinayaa mid lamid ah xaaladda ciraaq"ayuu markale ku hadaaqay wasiirkii hore ee difaaca Washington.
26-ka saldhig ee Taliban ay qabsatay marka lagasoo tago waxay qarka usaarantahay in ay lawareegto gobolka Nuristan ee dhaca bariga dalka Afghanistan.
Taliban oo qabsaday 30 degmo iyo Boqolaal katirsan ciidamada xukuumadda oo isdhiibay [Sawirro].
Weerar Naf hurnimo oo lagu beegsaday saldhigga ciidanka Meleteri ee Biya Cadde.
Midowga Yurub oo ku dhawaaqay in uu jaray Inta badan lacagtii uu siin jiray Melleteriga Kenya ee ku sugan Soomaaliya.
Sawirro: Dagaalyahannada Taliban oo dagaal ku qabsaday 120 gaari iyo saanado hub ah!
Dhageyso: Waaliga Banaadir oo ka hadlay weerarkii Naf hurnimo ee ka dhacay meel ku dhow saldhigga Turkiga.
NATO oo go'aamiyay in ciidamadiisu ay sii joogaan Afghanistan iyo Taliban oo ka digtay.
Faah Faahin dheeraad ah oo laga helay qarax lagu beegsaday saldhig melleteri [Warbixin].
Mareykanka oo sheegay in uusan duqeymo ku taageeri doonin ciidanka xukuumadda Afghanistan.
Dagaalyahannada Taliban oo qabsaday magaalooyin katirsan dalka Afghanistan.
Sawirro: Ciidamada Yahuudda oo maalintii 2aad weerar ku haya masjidka Al Aqsaa.
10/05/2021 - 14:59:42
Sawirro: Beelaha Wilaayada Islaamiga Galguduud oo Gurmad gaarsiiyay Bacaadweyne.
08/05/2021 - 18:57:20